ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ पर्नुको खास कारण चाहिँ यस्तो रहेछ ! हेर्नुहोस्
April 23, 2020 2947
हामी नेपाली हाम्रो नेपाल’ अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीवि’रुद्ध संक्रमण रोग नियन्त्रण ऎन २०२० अनुसार मु’द्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीले यसैमा केन्द्रीत भएर अनुसन्धान सुरु गरेको जान’कारी दिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसए’सपी टेकप्रसाद राईका अनुसार उनलाई मंगलबार राति प क्राउ गरिएको हो। राहत बाड्ने कुरामा समन्वय गर्न खोज्दा प्रशासनविरुद्ध गएपछि पक्रा उ गर्न बाध्य भएको एसएसपी राईले बताए।
प्रहरीका अनुसार शाही स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधि कसैसँग समन्वय नगरी राहत बाड्ने भन्दै हिडेका थिए। सरकारले राहत बाडनु भन्दा पहिला स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुपर्ने नीति तथ गरेको छ। वडामा सम्पर्क गरेर मात्र राहत बाड्न आग्रह गर्दा शाहीले फेसबुक लाइभ गरी प्रशासनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख तथा प्रहरीलाई निरन्तर धम्की’पुर्ण फोन, अश्ली’ल म्यासेज आएपछि बाध्य भएर शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको दाबी छ।
‘मा’र्छु, का ट्छु भन्दै धम्की आए, प्रायजसो बिदेशबाट आएका छन्’ राइले भने ‘मेसेजमा परिवार, छोराछोरी स’काइदिन्छु भनेका छन् ।’
फोन तथा म्यासेज आएका नम्बरको निगरानी सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ । इन्टरपोल र साइबर ब्यूरोको सहयोगमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला नियन्त्रणमा लिन सकिने राइले बताए।
प्रहरीले समन्वय गर्न खोज्दा उल्टै प्रशासनलाई चुनौती दिन थालेकाले अनुसन्धानका लागि प क्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फोन तथा म्यासेज गर्नेहरु शाहीबाट परिचा’लन भएका हुन् या अरु नै हुन भन्ने विषयमा पनि प्रहरीले हेरिरहेको छ।
राहत बाड्नु भन्दा पहिला कुन ठाउँ’मा कति बाड्ने ? स्थानीय तहमा जानकारी हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख्य भएको प्रहरीले जनाएको छ। – अन्नपुर्ण पोस्ट
Prevपाथीभरा माताको जय होस् , आज बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextदक्षिण कोरिया’ले नेपाली लाई पनि सरकारी राहत दिने
अन्तरजातीय बिहे गरि जंगलमा लुकेका जोडी फर्किए घर, फर्कनेवित्तिकै मालतीलाई छुट्टाएर लगियो
महान् श्रीमान विनोदलाई लन्डनबाट आयो यती सहयोग, यस्तो परिवर्तन आयो अनितामा (भिडियो हेर्नुहोस्)
सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु`होस्
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (105033)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (85548)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (68557)